တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဂျာမနီနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mrs. Dorothee Janetzke-Wenzel အား လက်ခံတွေ့ဆုံ » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
ဇန်နဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၈ မေ ၃၀၊ ၂၀၂၀
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဂျာမနီနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mrs. Dorothee Janetzke-Wenzel အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီ- ၁၀
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံသံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ ခန႔္အပ္ျခင္းခံရသည့္ H.E.Mrs. Dorothee Janetzke-Wenzel အား ယေန႔မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌လက္ခံေတြ႕ဆုံသည္။
အဆုိပါေတြ႕ဆုံပြဲသုိ႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)မွ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စုိးထြဋ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။
ထုိသုိ႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ဂ်ာမနီႏုိင္ငံဆက္ဆံမႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္ပုိမိုနီးကပ္စြာဆက္ဆံႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္မည့္အေျခအေနမ်ား၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏စစ္မႈထမ္းျခင္းဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးစစ္မႈထမ္းမ်ား တာ၀န္္ထမ္းေဆာင္ေနမႈအေျခအေနမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္တြင္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားတာ၀န္ေပးအပ္ထားမႈအေျခအေနမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတည္ၿငိမ္းေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္တပ္မေတာ္မွ ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ား၊ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈရရွိေစရန္ အတြက္အစုိးရႏွင့္တပ္မေတာ္မွေဆာင္ရြက္ေနမႈႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ခြာသြား သည့္ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ားအား ဥပေဒႏွင့္အညီျပန္လည္လက္ခံေရးကိစၥရပ္မ်ားအား အျမင္ခ်င္း ဖလွယ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
ေတြ႕ဆုံပြဲအၿပီးတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ဂ်ာမနီႏုိင္ငံသံအမတ္ႀကီးအား အမွတ္တရလက္ေဆာင္ပစၥည္းေပးအပ္ခဲ့သည္။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဂျာမနီနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mrs. Dorothee Janetzke-Wenzel အား လက်ခံတွေ့ဆုံတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဂျာမနီနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mrs. Dorothee Janetzke-Wenzel အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နေပြည်တော်၊ ဇန်နဝါရီ- ၁၀
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျာမနီနိုင်ငံသံအမတ်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်းခံရသည့် H.E.Mrs. Dorothee Janetzke-Wenzel အား ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာ ဧည့်ခန်းမဆောင်၌လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးထွဋ်နှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ဂျာမနီနိုင်ငံဆက်ဆံမှုအခြေအနေများနှင့် တပ်မတော်နှစ်ရပ်ပိုမိုနီးကပ်စွာဆက်ဆံနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်မည့်အခြေအနေများ၊ မြန်မာ့တပ်မတော်၏စစ်မှုထမ်းခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ အမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းများ တာဝန််ထမ်းဆောင်နေမှုအခြေအနေများ၊ လွှတ်တော်တွင် တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များတာဝန်ပေးအပ်ထားမှုအခြေအနေများ၊ မြန်မာနိုင်ငံတည်ငြိမ်းအေးချမ်းရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်တပ်မတော်မှ ဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုရရှိစေရန် အတွက်အစိုးရနှင့်တပ်မတော်မှဆောင်ရွက်နေမှုနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာသွား သည့် ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများအား ဥပဒေနှင့်အညီပြန်လည်လက်ခံရေးကိစ္စရပ်များအား အမြင်ချင်း ဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က ဂျာမနီနိုင်ငံသံအမတ်ကြီးအား အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးအပ်ခဲ့သည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် သည်ဂျာမနီနိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E. Mrs.Dorothee Janetzke-Wenzel ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Mr.Taro KONO အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
သျှရီသျှရီစန္ဒီမယ်တော်ဘုရားကျောင်းသို့ တပ်မတော်(ကြည်း၊ ရေ၊ လေ) မိသားစုများက COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်၊ ကုသ၊ ထိန်းချုပ်ရေး အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများနှင့် အလှူငွေများ ပေးအပ်လှူဒါန်း
တပ်မတော်သားတိုင်းသည် ဥပဒေနှင့်အညီ လက်နက်ကိုင်ဆောင်၍ တာဝန် ထမ်းဆောင်ရသူများဖြစ်၊ စစ်စည်းကမ်း၊ စစ်ဘက်/အရပ်ဘက် ဥပဒေများနှင့် နိုင်ငံတကာဥပဒေ၊ သဘောတူညီချက်များကို သိရှိလိုက်နာ၊ ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ၊ ဆန္ဒစွဲ ကင်းရှင်းစွာဆင်ခြင်တုံတရားဖြင့် ဥပဒေနှင့်အညီဆောင်ရွက်
ဧပြီ ၁၈၊ ၂၀၁၈ Admin 0
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဇေယျာသီရိဗိမာန်၌ ကျင်းပပြုလုပ်သော ရေကြောင်း နှင့် လေကြောင်းလူငယ်မောင်မယ်များအား ဂုဏ်ပြုတွေ့ဆုံပွဲ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်
မေ ၂၀၊ ၂၀၁၈ Admin 0